Ny vondrom-piarahamonina PU PEO misy vondrona foko 54 any Vietnam - Ny tany masina amin'ny fandalinana Vietnam
Wmponina 900 izy io, ny PU PEO dia mifantoka ao amin'ny Sisintany China-Vietnam faritra in Dong Van, Yen Minh ary Distrika Meo Vac of Ha Giang1 Province. Antsoina koa izy ireo Ka Beo ary Penti Lo Lo. Ny fitenin'izy ireo dia manakaiky ny an'ny Co Lao, La Chi ary La Ha ary an'i Jehovah Vondrona Kadai2.
Tizy PU PEO dia mamboly katsaka, vary, ranony ary tsaramaso amin'ny milpas sy tanimboly misy terraces. Ny fitaovam-pambolena dia misy ny angadinomby sy ny rakotra ary ny omby ho fanamafisana. Taloha ny foto-tsakafom-bary In dally sakafo dia steamed lafarinina com.
Tmitafy ny vehivavy PU PEO izy dia mitazona ny mombamomba ny firenena hita amin'ny alàlan'ny volon'izy ireo, ny volon-doha, zipo, akanjo na aprons. Mitrandraka tapa-damba samy hafa izy ireo mba hamoronana lamina haingo. Akanjo toy ny foko hafa any amin'ny faritra ny lehilahy.
Ny tranony dia miorina amin'ny tany amin'ny sampahony kely. Ny PU PEO dia mifandimby mifandimby amin'ny Hoa ary Hmong. Ny razamben'ny fianakaviana tsirairay avy dia manana ny rafitry ny anarana afovoany. Ao anatin'ny tsipika iray dia omena anarana mitovy eo afovoany ireo olona iray ao amin'ilay taranaka.
They tandremo tsara ny fitsipiky ny fanambadiana liner. Raha misy lehilahy avy amin'ny firazanana A manambady vehivavy iray avy amin'ny razamben'i B, dia tsy avela haka vady avy amin'ny A. ny lehilahy avy amin'ny firazanana A. Maro ny olona avy amin'ny foko hafa lasa vinantovavikely na vinanton'i PU PEO fianakaviana. Ny fianakavian'ilay mpampakatra dia mitady fanambadiana ho azy ary, aorian'ny fety fampakaram-bady, dia miditra amin'ny fianakavian'ny vadiny ny ampakarina. Ny ankizy dia mitondra ny anaran'ny ankohonan'ny rainy; ny ray na ny vady no tompon'ny trano.
Fny fombafomba uneral dia ahitana ny lanonana momba ny bunal sy ny lanonana manolotra ny fanomezana. Ny PU PEO dia manome lanja lehibe ny fiankohofana amin'ny razana. Eo amin'ny alitara dia matetika apetraka amin'ny tavoara tany kely, ny tavoara tsirairay dia tandindon'ny taranaka iray. Ny PU PEO dia manao lanonana sy fety maro isan-taona.
Tizy PU PEO dia iray amin'ireo foko vitsy mbola mampiasa amponga varahina, fa amin'ny fombafomba fotsiny. Ao amin'ny fadin-tseranan'i PE PEO dia misy amponga lahy sy vavy ampingaina tsiroaroa. Nifanatrika ireo amponga roa ary olona iray mitsangana eo anelanelany no mikapoka azy ireo.
Sahan-tseranana ao amin'ny faritanin'i Ha Giang (Loharano: Mpanonta VNA)
(Visited 1,581 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny vondrom-piarahamonina RA GLAI misy foko etnik 54 any Vietnam
Ny vondrom-piarahamonina H'MONG misy vondrom-poko 54 ao Vietnam →
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,774)
Andro farany 7 nitsidika: 2,297
Total visits: 420,548